Ukuvota - Ibhodi eliyisicaba noma ibhokisi le-Resonance? – Ikhasi 2 – Okujwayelekile – Inkundla yeKalimba
Ipholi - Ibhodi eliyisicaba o...
Iyiphi oyithandayo? Kungani? Ipholi idalwe ngomhla ka-Dec 29, 2020
I-Poll - Flat board noma i-Resonance box?
Ikhasi 2 / 2 Okwangaphambilini 1 2
Omunye ongawubuka uvale umsindo!
Kuthunyelwe: 31/12/2020 1:53 am
Ummeli weKalimba Admin
@syabongampungos Ngicabanga ukuthi ama-memes izizukulwane ezincane afana kakhulu! Ngiyaxolisa ^^ futhi ngithemba ukuthi ufunde okuthile
Umnikazi we UKalimbera.com futhi KalimbaForum.com
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 31/12/2020 1:55 am
Ekugcineni, ibhokisi le-resonance lizoba ukukhetha kwami ​​​​komsindo. Kungumsindo womhlaba, oyindilinga ongazwakala ekamelweni eli nezinye izinsimbi zomculo we-acoustic.
Futhi kufanelekile ukusho ukuthi kukhona i-spectrum ebanzi yekhwalithi yamabhokisi kalimbas. Izinhlamvu ezifile zimbi kakhulu! Nginenhlanhla yokuthi ngikwazi ukusho ukuthi cishe wonke ama-kalimba ami ango-Hugh Tracey (ngiphinde ngineGecko, nezinsimbi zekhwalithi ezifanayo ezithengwe e-Amazon), zinenani elifanele kodwa zifanele yonke imali. Insimbi yomculo yase-Afrika, eyenziwe ngokhuni oluhle lwase-Afrika, eyenziwe e-Afrika. Sebehlale kugeyimu isikhathi eside kunanoma ubani, futhi kuyavela.
Ngokuthenga ithuluzi lebhajethi, ukuzama uhlobo olusha, noma ukuthatha ithuba kuma-tines, mhlawumbe ngingabeka ukubheja kwami ​​ebhodini eliyisicaba.
Kubhalwe: 31/12/2020 7:55 pm
Umongameli Weforamu Moderator
Ngiyawathanda wonke ama-tines ami asebenza ngakho-ke ngithanda i-flatboard kangcono.
Kuthunyelwe: 08/01/2021 2:43 am
Okokuqala, ngizozama i-Kmise enebhokisi lomsindo, (ngivele ngiyi-odile namuhla).
Kubhalwe: 08/02/2021 4:14 pm
@pensionerposse Kuyathakazelisa! Angilwazi lolu hlobo kodwa lubukeka luhle 🙂 Iminwe ihlangene ukuze ilethwe ngokushesha 🤩
Kuthunyelwe: 09/02/2021 8:37 am
ImpesheniPosse futhi Nataliya ithandiwe
I-Kmise yenza izinhlobonhlobo zezinsimbi zomculo zekhwalithi enhle ngokufanele, ngine-chromatic harmonicas yabo engu-2, futhi abanye babangane bami abavela kuforamu yami yokulele bathi ama-ukes abo ayilungele imali futhi.
(Ngiyethemba ukuthi ngeke ifike 'namathambo afile' njengoba abanye benu ngeshwa benawo ekuthengeni kwakho.)
Kuthunyelwe: 09/02/2021 9:33 am
I-Kmise yami (izinhlamvu eziyi-17 ezingenalutho) isanda kufika, yaqaqa futhi yazama amanothi, elilodwa nje elisezingeni eliphakeme alizwakali kahle, (kodwa liyabanda, ngakho-ke lokho kungase kube yingxenye yalo, bekufanele liyinikeze ngokushesha ). 😉
Kubhalwe: 13/02/2021 2:00 pm
@pensionerposse Sikuthola lokho futhi ngezinye izikhathi - ngisho noma kuzwakala uma sikuthumela. Sicabanga ukuthi kungenxa yokushintsha kwezinga lokushisa ngesikhathi sokuthunyelwa. Liyeke liphumule ekamelweni lokushisa isikhashana bese uzama ukulilungisa kabusha - lokhu kuvame ukuzilungisa.
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 13/02/2021 4:57 pm
Ngifunde okuningi nge-flat-board kanye ne-kalimba engenalutho, futhi ngahamba ngebhodi eliyisicaba.
Ngiyayithanda indlela odlala ngayo ngokuthambile, ikakhulukazi ngoba ngijwayele ukuzilolonga ekuseni uma unkosikazi esalele. Futhi njengoba umkhulu ejwayele ukuthi: "abafazi abalele mabaqambe amanga" 😮
Kuthunyelwe: 25/02/2021 9:23 am
GreenLarry futhi Nataliya ithandiwe
@frankv Umkhulu wakho akakwazanga ukuhlakanipha - kufanele ngimnike lokho.
Hlobo luni lwebhodi eliyisicaba ozilolongela kulo? kubonakala kuthakazelisa kakhulu
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 25/02/2021 10:13 pm
Posted by: @ukhozi_fm
I-kalimba eyenziwe ekhaya.
Amathayina a-odwe e-Amazon kanti izinkuni ziwuphayini. Ngi-ode ucezu oluhle lwe-oki ngoba ngithole kuwebhu ukuthi ukhuni oluqinile lunikeza umsindo ongcono. Kodwa lapho ifika kwaba nokuqhekeka okukhulu kuyo. Ngangingafuni ukulinda ukuthi kufike entsha ngakho ngathatha izinkuni zikaphayini engangizilele ngenza i-kalimba yami. Ingabe isihlahla nezinyoni zifanekisela i-pyrography (enye into engizilibazisa ngayo) futhi zangcolisa izinkuni.
Kumele ngithi, endlebeni yabaqalayo, akuzwakali kubi kangako. Naphezu kwezinkuni ezithambile
Kuthunyelwe: 26/02/2021 6:08 am
Posted by: @karinvdb
@alpobc Angicabangi ukuthi lokho kungasebenza. Angiyena uchwepheshe kodwa nginomuzwa wokuthi isizathu sokuthi i-kalimba engenalutho inezinkinga ngamanothi aphezulu / ama-tines angaphandle ikakhulukazi ukuthi usondela kakhulu emaphethelweni, ibhokisi elingenalutho yilokho elizwakalayo futhi elisebenza kahle phakathi.
Cha ngikholwa ukuthi amanothi angaphandle awazwani kangako ngoba amanothi aphezulu kakhulu. Amanothi aphakeme awakhali isikhathi eside njengamanothi aphansi kunoma iyiphi insimbi.
Kubhalwe: 30/01/2022 9:24 pm
Zonke izihloko zeforamu
I-Topic Tags: i-flatboard (1), ibhokisi le-resonance (1), ukukhetha komuntu siqu (1),
Latest Post: I-Poll - Flat board noma i-Resonance box? ilungu lethu entsha: ellenborrie0454 Okuthunyelwe kwakamuva Okungafundiwe Okuthunyelwe Amathegi